पेस्तोलसहित क्याम्पसका लेक्चरर पक्राउ « MNTVONLINE.COM
काठमाडाैँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट गए राति प्रहरीले स्वचालित पेस्तोलसहित एक शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा लेक्चररको पदमा कार्यरत सर्लाही जिल्लाको बलरा नगरपालिका–१० निवासी जितेन्द्रप्रसाद सिंहलाई प्रहरीले वीरगञ्ज–वडा नं ११ दुर्गाटोलस्थित निजी निवासबाट अवैध हतियारसहित पक्राउ गरेको हो ।
नेपालगञ्जमा अनुसन्धान विभागका सहायक सूचकको हत्या
पैसाको लागि सामूहिक बलात्कारको नाटक, युवती पक्राउ !
काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत !
काठमाडौँबाट एटिएम बुथ फुटाउँदै गरेको अवस्थामा तीनजना पक्राउ !
लागुऔषध कारोबारमा संलग्न एक महिलासहित तीन जना पक्राउ
नागढुङ्गाबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ !